Degso muuqaalka hore ee kamaradda weyn ee Adobe Photoshop | Androidsis
[APK] Soo dejiso oo rakib PS Camera, oo ah kamaradda Adobe ee qof walba ka hadlayo
Waxaan sugeynay 2020 si aan u soo wareegno si aan gacmaheena u qabsano Kaamirada Adobe Photoshop, laakiin muuqaalka ayaa hadda lagu sii daayay Android adiga si aad u tijaabiso AI oo ballanqaadaya inuu noqon doono kacaan abuurista waxyaabaha ku jira aaladda moobaylka.
Haa, ahaanshaha hore, iyo ku dhowaad alfa-beta, Ma filan karno sida ugu fiican ee waxqabadka iyo boosteejooyinka qaarkood (waxaa jira dhowr iswaafajin kara oo dhammaad leh), waayo-aragnimadu maaha mid aad loo jecel yahay. Xitaa sidaas oo ay tahay, waad isku dayi kartaa si aad fikrad uga hesho sida ay noqon doonto in la abuuro waxyaabo tayo sare leh laga helo barnaamijka kamaradda Adobe.
1 Adobe Sensei oo ku jira barnaamijka kaamirada moobiilkaaga Adobe
2 Waa maxay horudhaca kamaradda Adobe Photoshop
3 Waxa aad ka heli doontid barnaamijka kaameradda moobilka Adobe
4 La cusbooneysiiyay 13/12/19
Adobe Sensei oo ku jira barnaamijka kaamirada moobiilkaaga Adobe
Adobe Sensei waa teknolojiyadda sirdoonka macmalka ah ee Adobe in ay ku hirgelisay buugyaraha ay ka kooban tahay ee barnaamijyada, sida Photoshop, Illustrator ama Lightroom. Sirdoon macmal ah oo u adeega hawlo badan iyo in badan oo inaga mid ah ayaa naga badbaadiya dadaal badan. Waxaan ka hadleynaa karti u yeelashada in aan ku soo xulo shay guji oo markaa waxaan leenahay asalka si loo abuuro cillad goobeed ama si fudud looga saaro goobta.
Oo markaa waxaan dooneynaa inaan helno khibrad aad u fiican oo barnaamijkan cusubi bixiyo iyo waxa ku saabsan wax kasta oo ay hadda bixiso, waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee abuuri kara waxyaabo tayo sare leh. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa tusaalooyin ah farta iyo ku ciyaarida miirayaasha.
Oo hadda waa markii aad awoodi doontid inaad tijaabiso tii hore ee aan kula wadaagi doonno sidaas bilow inaad aragto waxa Adobe Photoshop Camera uu ku saabsan yahayiyo waxaan horey uga hadalnay dhowr toddobaad kahor.
Waa maxay horudhaca kamaradda Adobe Photoshop
Marka hore waxaan soo degsan doonnaa APK:
Kaamirada Adobe Photoshop: APK
Iyada oo ah APK ayaan ku rakibnay barnaamijka waana ku geli karnaa aqoonsiyadayada Facebook, Google ama Adobe. Waa inaan kugula talinaa inuu barnaamijku yahay horudhac guud, marka waxqabadka wuu kala duwanaan karaa.
Samsung Xusuusin 10/10 +
Daawade waa xad dhaaf, in kastoo kiiskeenna (oo leh Galaxy Note 10 +) waxqabadka uu yahay mid ku habboon waxayna noo ogolaaneysaa inaan shaashadda ka qaadno kii hore. Ka dib markaad tafatirto sawirka ka dib, Adobe Photoshop Camera wuxuu bixiyaa shaqooyin waaweyn si loo yareeyo loona kordhiyo caddaanka, dhererka, isbarbar dhiga, iftiinka, madow iyo wax badan oo dheeri ah. Si kale haddii loo dhigo, ma noqon doonto oo kaliya in la doorto kii hore, laakiin goor dambe ayaad awoodi doontaa inaad ka tagto sawirka ugu dambeeya si aad u wanaagsan.
Waxa aad ka heli doontid barnaamijka kaameradda moobilka Adobe
Shaashadda ugu weyn waxaa lagu gartaa aragtida muuqaalka iyo badhanka fure ee ku yaal salka hoose ee kamaradda. Dhinac kiciye waxaan marin u leenahay miirayaasha kan kalena badhanka sawirka sawirka. Xagga sare waxaan ka heli karnaa badhanka noo oggolaanaya inaan kala soo baxno shaandhooyin iyo xulashooyin badan.
Shaandheeyaashu si fiican ayey u kala duwanaayeen waana beddeli karnaa dhexdooda tilmaam dambe. Runtu waxay tahay inay jiraan noocyo badan oo mid ah oo aan la ciyaarnay waa labanlaabnaanta soo-gaadhista. Ku celcelin yar ayaad ku abuuri lahayd sawirro qurux iyo tayo weyn leh. Waxaan ku siineynaa tusaalooyin si aad u aragto.
Aad ayey u layaab badan tahay sida markaan sawir ka qaadno sawirka Adobe Sensei wuu awoodaa inuu hagaajiyo iyadoo kuxiran sawirka. Haddii uu ogaado in asalka uu mugdi yahay, kaliya wuxuu wax ka beddeli doonaa qeybtaas sawirka si uu uga dhigo mid is waafajisa. Sawirka soo socda waxaad kuheleysaa midka bidix ee aan lagaa taabsiin, iyo midka midigta midigta:
Miirayaasha «Muuqaalka» awoodaan inay siiyaan codkooda gaarka ah sidaa darteed mid kasta oo ka mid ah hagaajinta laga heli karo shaandhadaani waa mid gaar ah. Waxaad ka arki kartaa halkan:
Adiga oo adeegsanaya isla sawirkaas, waxaad ku ogaan kartaa sida ugu fiican ee Adobe Photoshop Camera uu yahay. U beddel samada xagga hawadeenna iyada oo aan dhib lahayn sawirka intiisa kale waa la arki karaa.
Ama sida aan awoodno inaan ugu beddelno qabashada mid habeen ah oo xitaa u dhigno xiddigahaas sidii inaan mid qaadaneyno sawir soo-gaadhis weyn.
Mid kale oo ka mid ah awooda barnaamijkan sidoo kale wuxuu kujiraa dib-u-farsameynta sawirada iyo mid ka xulashada mid ka mid ah shaashadda si uu uguugu celiyo daraasiin miirayaal ah oo aad haysato.
Dareennada ay naga reebtay ma fiicnaan karin haddii aan horudhacna ku jirno, xitaa ma dooneyno inaan qiyaasno goorta nooca ugu dambeeya uu diyaar yahay. Kaamirada Adobe Photoshop wax badan ayey bixisaa caqliga macmalka ahna waa kii ugu fiicnaa ee aan soo aragnay. Si fiican u fiirso tusaalooyinka la bixiyay maaddaama ay yihiin sawirro nalaga soo celiyey muddo aan ku ciyaarnay.
Dhammaan kahor imaatinka kamaradda Adobe Photoshop taasna durba wax badan baa la ballan qaadayaa. Waxayna umuuqataa inay noqon karto kahor iyo kadib sameynta waxyaabo farabadan oo moobil ah. Intooda kale ha la sii wado, maxaa yeelay baarka ayay aad u sarreeyeen.
La cusbooneysiiyay 13/12/19
Waxaan idiinka tegayaa cashar fiidiyow ah oo lamaanahaygu Sawirka Francisco Ruiz Antequera Waxay ku tusinaysaa habka loo soo dejisto loona rakibo apk iyo sidoo kale hawlgalka iyo howlaha ugu muhiimsan ee ay bixiso Adobe PS Cam.
Xusuusnow inaadan fidiideyn fiidiyowga maadaama uu yahay fiidiyoow taagan si aad uga dhex arki karto shaashad buuxda oo markaa sifiican u arkee arjiga sida haddii lagu rakibay qalabkaaga Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » [APK] Soo dejiso oo rakib PS Camera, oo ah kamaradda Adobe ee qof walba ka hadlayo
Samsung waxay beenisay in 1 milyan oo unug oo Galaxy Fold ah la iibiyay
Samsung Internetka wuxuu ballaariyaa taageerada kordhinta qalabkiisa